Qwalasela amaphepha akho ewebhu owathandayo ngokubulela kuSafari kwi-MacOS High Sierra | Ndisuka mac
Qwalasela amaphepha akho ewebhu owathandayo ngokubulela kuSafari kwi-MacOS High Sierra
Ukuza kuthi ga ngoku iApple ikhuphe iNkqubo eNtsha yokuSebenza yeekhompyuter, ethiwe thaca kwi-WWDC edlulileyo emva kwinyanga kaCanzibe. Ukusukela ngoko, ngabaphuhlisi kuphela abanokufikelela kwiibhetas ezilawulwa yiApple kulo lonke ihlobo.
Namhlanje, nge-25 kaSeptemba 2017, iMacOS ePhakamileyo yeSierra sele iyinyani. Uninzi lwezinto ezintsha zibandakanyiwe kwi-OS entsha eyenziwe ngabafana baseCupertino, kwaye izicelo ezinje ngeMeyile kunye neSafari zenze utshintsho olukhulu oluza kusenza siyonwabele ngakumbi ikhompyuter yethu, ukuyenza isebenze ngakumbi kwaye ikhuseleke.
Enye yezinto ezintsha zokuqaqambisa umbulelo kule OS intsha, Kukungangqinelani okubonelelweyo ukusukela ngoku isikhangeli sayo esingagqibekanga, iSafari. Enkosi kwiMacOS ePhakamileyo yeSierra, iSafari sisixhobo esinamandla ngakumbi kuneMacOS Sierra, eyandulelayo.
Enye yezona zinto zintsha zibalaseleyo, kwaye esikungenisayo kuSoy De Mac njengesifundo, yile ukumisela njani amaphepha ewebhu ukuthanda kwethu kunye nemfuno, ngendlela ebhalwe igama lomntu kunye neyodwa.
Masiyibone ngqo nomzekelo:
Ukuba sifaka iphepha lewebhu, nakwibha yokukhangela (apho singena khona kwi-url esifuna ukufikelela kuyo) sicofa kwaye sibambe iqhosha lolawulo (ctrl) lekhibhodi yethu, ukhetho olutsha lubonakala lubizwa «Useto lwewebhusayithi». Ukuba sicofa kolu khetho, oku kulandelayo kuya kuvela:
Apha, Sinokukhetha iindlela ezahlukeneyo eziza kusebenza kweli phepha lewebhu, ukuze sikwazi ukwenza ngokhangelo lophendlo ngalunye, okanye amaphepha asetyenziswa rhoqo. Iluncedo ngokwenene.
Phakathi kwezinto onokukhetha kuzo, sifumana:
Sebenzisa umfundi (xa ekhona): izakuvula ngokuzenzekelayo imo yokufunda, xa kunokwenzeka, ukuze iSafari ingayihoyi intengiso ecaphukisayo, ikhefu lephepha kunye nokuphazamiseka. Iluncedo kakhulu kumaphephandaba nakwiimagazini ezinomdla.
Nika amandla umxholo webhloko: izakususa, kangangoko, nakuphi na ukubhengezwa okucaphukisayo kwiwebhusayithi. Lo msebenzi usebenzisa i-blocker yesiqulatho se-Safari okanye enye into ukuba sinento efakiweyo (i-AdBlocker,…).
Ukusondeza iphepha: ngamanye amaxesha kuyanceda xa ubungakanani bephepha bungachanekanga, okanye ukuba sinengxaki yombono.
Iyazidlalela: Xa singena kwiwebhusayithi enomxholo wevidiyo (iYouTube, iVimeo, iFacebook, ...), lo msebenzi usetyenziselwa ukumisela ukuba sifuna ukuba ividiyo idlale ngokuzenzekelayo okanye hayi, ngesandi okanye cwaka, ...
Ikhamera: Kuxhomekeka kwiwebhusayithi esifikelela kuyo, inokuthi okanye isenokungafuni ukuba sisebenzise i-cam kwikhompyuter yethu. Lo msebenzi ukuvumela ukuba ube noseto olufunekayo esele luqwalaselwe ngaphandle kokuba ubuzwe liphepha ngokwalo.
Imakrofoni: ngokufana nekhamera, ukuba kulo naliphi na iphepha esifuna ukusebenzisa imakrofoni sinokuyiqwalasela ngexesha le-1 ukuze ingasibuzi ngalo lonke ixesha silifumana.
Indawo: Idem kodwa ngeli xesha, kwinto ethe kratya kwaye echitha ibhetri eninzi ngasemva, indawo.
Ngelixa olu tshintsho lungafikeleli kumzamo omkhulu womsebenzisi, Ewe kusivumela ukuba sibe nenqanaba elongezelelweyo loqwalaselo kwimisebenzi yemihla ngemihla eyenziweyo kwisixhobo sethu. Ngaphandle kwamathandabuzo, utshintsho oluncinci oluthi ngendlela elula lusivumele ukuba senze ikhompyuter yakho ibe yeyakho ngakumbi.
Njengoko ubona, iSafari isizisela iindaba ezininzi ezinomdla, kwaye loo nto iya kuqhuba kakuhle kumhla wethu phambi kwekhompyuter. Ke ukuba awukaqiniseki ukuba ungayihlaziya na le OS intsha, ukusuka kuSoy De Mac siyakumema ukuba wenze njalo. Ukhuseleko, uzinzo kunye nokuphuculwa kwesantya okuya kwenza iMac yakho isebenze njengosuku lokuqala.
Ezi kunye nezinye izinto ezintsha esiza kuzifumana kwinkqubo yokuSebenza entsha yenkampani, eqhubeka nokutyhala ngamandla kwiikhompyuter zayo zePro kunye neeMacs zayo, ziya kutyhilwa kancinci kule portal. Yintoni egqithisile, Ukuba uyafuna ungazijonga iindaba zokuba iMacOS ePhakamileyo yeSierra isizisa kwi Iphepha lika-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Qwalasela amaphepha akho ewebhu owathandayo ngokubulela kuSafari kwi-MacOS High Sierra
I-Apple TV 4K ayikuvumeli ukhuphelo lomxholo we-4K